सेयर बजारमा फर्कियाे हरियाली - Laganikhabar
विहीबार, ०६ माघ २०७८| Thursday, January 20, 2022
सेयर बजारमा फर्कियाे हरियाली
सोमबार, २० मंसिर २०७८, १५ : १३ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौँ - कारोबार हुने हप्ताको दोस्रो काराेबार दिन आज (सोमबार) सेयर बजार वृद्धि भएको छ । लगातारको गिरावट पछि आज भने सेयर बजारमा हरियाली देखिएकाे हाे ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३२.२२ अंकले बढेर २५४६.०८ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से १.२८ प्रतिशतले बढेको हो । यता सेन्सेटिभ परिसूचक भने ७.६३ अंकले बढेर ४८०.९७ विन्दुमा पुगेको छ ।
कूल २२७ वटा कम्पनीको ९४ लाख ७१ हजार ३ सय ११ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ४ अर्ब ५४ करोड २३ लाख ४५ हजार २ सय ७१ रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये आज सबै उपसमूहको सेयर बढेको छ । आज सबैभन्दा धेरै डेभलपमेन्ट बैंक समूहको सेयर बढेको छ ।
आज नबिल बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । आज बैंकको १७ करोड १५ लाख ९३ हजार १ सय २८ रूपैयाँको कारोबार भएको छ ।
सोमबार मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ । आज कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर १ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ २० पैसामा अन्तिम कारोबार भएको छ । त्यस्तै जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्ति वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य सर्वाधिक घटेको छ । आज कम्पनीको सेयर मूल्य ६.८८ प्रतिशतले घटेर २ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ ।
हेर्नुहोस् आजको तालिका :
एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थपियाे
निफ्राको वित्तीय विवरण प्रकाशित : अधिकांश सूचकमा चमक
नेशनल माईक्रोफाइनान्सकाे बम्पर लाभांश आज पारित हुँदै
३८ अंकले घटेको बजारमा यी १० कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक बढ्यो
यी हुन् आज सर्वाधिक कारोबार गर्ने १० कम्पनी
राताम्मै भएको बजारमा यी १० कम्पनीका लगानीकर्ताले व्यहोरे सर्वाधिक घाटा
६.६ मेगावाटको साप्सु खोला जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोडियाे
२२.२५ प्रतिशतले बढ्याे ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको नाफा, ईपीएस कति ?
सांग्रिला बैंककाे नाफासँगै बढ्याे ईपीएस, अधिकांश सूचक सकारात्मक
नेप्सेमा ९ लाख २६ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत
बजार घट्दा पनि यी १० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो
यतिमा भयो आज बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरको सेयर कारोबार
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा ३८.१० प्रतिशतले बढ्यो, ईपीएस कति ?
नेप्सेमा थपियाे २ कम्पनीकाे बाेनस
यी ३ कम्पनीको साधारण सभा आज हुँदै, कुनको के-के छन् एजेन्डा ?
नेप्सेमा २ कम्पनीको बोनस सेयर सूचिकृत
नेप्सेमा एक कम्पनीको बोनस सेयर सूचिकृत
सेयर टिप्स : ब्लु चिप सेयर भनेको के हो ?
यसकारण राष्ट्र बैंकले गर्याे यी लघुवित्तहरूकाे लाभांश राेक्का
© 2022 Seven Colors Media And Production House Pvt Ltd., All rights reserved.